Friends of MoeMaKa - Free Burma News Collection | Archives | 2016 | April
Posted on April 30, 2016 by freeburma
လျှပ်စစ် ဓာတ်အား မပြတ်တောက်စေရန် အတွက် အရန် ဓာတ်အားလိုင်းစနစ်တခု ထပ်မံ တည်ဆောက်မှသာ ဖြေရှင်း နိုင်မည် ဖြစ် ကြောင်း လျှပ်စစ်နှင့် စွမ်းအင်ဝန်ကြီး ဌာနမှ အဆင်မြင့် အရာရှိများက ဧရာဝတီသို့ ပြောသည်
The post လျှပ်စစ်မီး ပြတ်တောက်မှု ဖြေရှင်းရန် အတွက် အရန် မဟာဓာတ်အားလိုင်း ရှိရန် လိုအပ်ဟု ဆို appeared first on ဧရာဝတီ.
via ဧရာဝတီ http://ift.tt/1SAp6lp http://ift.tt/1PXzsvq
Posted in Intelligence - နောက်ခံအကြောင်းအရာ ဆိုင်ရာ	| Tagged Energy, Feedly, IFTTT, Intelligence, Recently Read	| Leaveacomment |
NLD အစုိုးရသစ်လက်ထက် သစ်ထုတ်လုပ်မှု ၁ နှစ် ရပ်ဆိုင်းမည်
၂၀၁၆-၁၇ ဘဏ္ဍာနှစ်အတွက် သစ်တွေလည်း တနှစ်စာလောက် ရှိသေးတယ် တန် ၄ ၊ ၅ သိန်းလောက်ပေါ့။ ဒါကြောင့် ဒီနှစ်ကို လုံးဝ မထုတ်တော့ပါဘူး။ ကျတော်တို့ဌာန အနေနဲ့ ဆုံးဖြတ်တာ။ အစိုးရအဖွဲ့ကို တင်ပြရဦးမယ်။ အခုလို ရပ်လိုက် တဲ့ အရသာကို ကြိုက်လို့ မထုတ်နဲ့ တိုင်းပြည်က အခြားနေရာက ၀င်ငွေရှာပေးမယ်၊ ထိန်းဆိုရင်လည်း ထိန်း သွားမယ်ပေါ့
The post NLD အစုိုးရသစ်လက်ထက် သစ်ထုတ်လုပ်မှု ၁ နှစ် ရပ်ဆိုင်းမည် appeared first on ဧရာဝတီ.
via ဧရာဝတီ http://ift.tt/1NI4hEh http://ift.tt/1PXzsvq
Posted in Cabinet - အစိုးရအဖွဲ့ပိုင်းဆိုင်ရာ	| Tagged Cabinet, Environment, Feedly, IFTTT, Recently Read	| Leaveacomment |
ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနဲ့ ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ အရေးပေါ်ညီလာခံ ခေါ်ယူပေးဖို့ဆိုပြီး ပါတီဗဟိုကော်မတီ ၁၃၆ ဦး၊ ရာခိုင်နှုန်းအားဖြင့် ၆၂ ရာခိုင်နှုန်းကျော် ကနေ တောင်းဆို ထားတဲ့ ပေးစာကို ကြံခိုင်ရေးပါတီ ဥက္ကဌ ဦးသိန်းစိန်ကို လိပ်မူပြီး ဒီကနေ့ ရက်စွဲ နဲ့ ပေးပို့လိုက်တာ တွေ့ရပါတယ်။
​သူရဦးရွှေမန်းအပါအ၀င် ပါတီ ခေါင်းဆောင်အချို့ ကို ထုတ်ပယ်လိုက်ပြီးတဲ့နောက်၊ ဦးသိန်းစိန်ဦးဆောင်တဲ့ ကြံခိုင်ရေးပါတီ ဗဟိုနဲ့ သူရဦးရွှေမန်းဦးဆောင်တဲ့ ကြံ့ခိုင်ရေးပါတီ ခေါင်းဆောင် အချို့အကြား နောက်ထပ် တင်းမာလာတဲ့…
via Voice of America http://ift.tt/1TANsdI http://ift.tt/Tf1V41
via Myanmar President Office http://ift.tt/23egdPR http://ift.tt/1V0lSqx
နိုင်ငံရေးသမားဖိနှိပ်ဥပဒေ ဖျက်သိမ်းရေး ကြိုဆိုကြ
၁၉၅၀ အရေးပေါ်စီမံမှု အက်ဥပဒေ နဲ့ နိုင်ငံတော် အားနှောက်ယှက် ဖျက်ဆီး လိုသူများ ဘေးအန္တရာယ်မှ ကာကွယ်စောင့်ရှောက်သည့် ဥပဒေတွေကို ရုပ်သိမ်းဖို့ အတွက် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် (NLD) အစိုးရက ပြင်ဆင်နေပါပြီ။ ဒီကိစ္စအပေါ် ဘယ်လိုတုံ့ပြန်ကြပါလဲ။ ဒီအကြောင်းအပြည့်အစုံကို မမြင့်မြင့်ခိုင် တင်ပြပေးပါမယ်။ Originally published at – http://ift.tt/26BNoRP
via VOA Burmese (uploads) on YouTube https://www.youtube.com/watch?v=B3CwwFMz6s8 https://youtube.com/playlist?list=UUv-YbGueeYCp8_CdjgXQD3A
ကြံ့ခိုင်ရေးပါတီ အရေးပေါ် ညီလာခံခေါ်ယူရန် ဦးသိန်းစိန်ထံ တောင်းဆို
ပါတီတွင်း ပြဿနာများ တရားနည်းလမ်းတကျ ဖြေရှင်းနိုင်ရေးအတွက် ပါတီအရေးပေါ်ညီလာခံ ခေါ်ယူပေးရန် ပါတီ ဥက္ကဋ္ဌ ဦးသိန်းစိန် ထံသို့ ပြည်ထောင်စု ကြံ့ခိုင်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေး ပါတီ(ကြံ့ခိုင်ရေး ပါတီ) ဗဟိုကော်မတီဝင် ထက်ဝက်ကျော်က လက်မှတ် ရေး ထိုးပြီး ယနေ့ တောင်းဆိုလိုက်ကြောင်း သိရသည်
The post ကြံ့ခိုင်ရေးပါတီ အရေးပေါ် ညီလာခံခေါ်ယူရန် ဦးသိန်းစိန်ထံ တောင်းဆို appeared first on ဧရာဝတီ.
via ဧရာဝတီ http://ift.tt/1UlV5Xs http://ift.tt/1OYtTeJ
ရခိုင်ပြည်နယ်အစိုးရသစ်ရဲ့ ရက် ၁ဝဝ စီမံကိန်း စတင်
ရခိုင်ပြည်နယ်ဖွံ့ဖြိုးရေး အပြောင်းအလဲဖြစ်စေမယ့် အစိုးရသစ်ရဲ့ ရက် ၁ဝဝ စီမံချက်ကို မူဝါဒ ၅ ရပ်နဲ့ စတင်အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်နေပြီလို့ ရခိုင်ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ် ဦးညီပုက ပြောပါတယ်။
via သတင်းများ http://ift.tt/1O0vlJO http://www.rfa.org
ငြိမ်းချမ်းရေး ညီလာခံ မတိုင်ခင် အပစ်ရပ်ကြဖို့ လိုလား
နိုင်ငံတော် အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကနေ ၂၁ ရာစု ပင်လုံညီလာခံ ကို တလ၊ နှစ်လအတွင်း ကျင်းပနိုင်ဖို့ ဧပြီလ(၂၇)ရက်နေ့ ပြည်ထောင်စုအဆင့် ပစ်ခတ် တိုက်ခိုက်မှု ရပ်စဲရေး ဆိုင်ရာ ပူးတွဲစောင့်ကြည့်ရေးကော်မတီ (JMC-U) အစည်းအဝေးမှာ တိုက်တွန်းပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ ၂၁ရာစု ပင်လုံညီလာခံပြုလုပ်နိုင်ရေး ပြောဆိုချက်အပေါ် တိုင်းရင်းသားခေါင်းဆောင်တွေက အမြင်သဘောထား ဘယ်လိုရှိနေပါသလဲဆိုတာ ဗွီအိုအေသတင်းထောက် နိုင်ကွန်းအိန်ကနေ အခုလို ဆက်သွယ်မေးမြန်းပြီးသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်။
via Voice of America http://ift.tt/1O0vmx8 http://ift.tt/Tf1V41
၁၉၅၀ အရေးပေါ်စီမံမှု အက်ဥပဒေ နဲ့ နိုင်ငံတော် အားနှောက်ယှက် ဖျက်ဆီး လိုသူများ ဘေးအန္တရာယ်မှ ကာကွယ်စောင့်ရှောက်သည့် ဥပဒေတွေကို ရုပ်သိမ်းဖို့ အတွက် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် (NLD) အစိုးရက ပြင်ဆင်နေပါပြီ။ ဒီဥပဒေတွေဟာ လက်ရှိဒီမိုကရေစီစနစ်နဲ့လည်း ကိုက်ညီမှုမရှိပဲ ၊ ရုပ်သိမ်း ဖို့ ပြင်ဆင်နေတဲ့ အပေါ်မှာ နိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်အသီးသီးကလည်း ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်။ ဒီအကြောင်းအပြည့်အစုံကို ဆက်သွယ်စုံစမ်း ထားတဲ့ကိုရန်နိုင်က ပြောပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။
အာဏာရှင်အစိုးရအဆက်ဆက် အတိုက်အခံနိုင်ငံရေးသမားတွေ နဲ့ တက်ကြွ…
via Voice of America http://ift.tt/1pLVK7X http://ift.tt/Tf1V41
Posted in LAWS - ဥပဒေပိုင်းဆိုင်ရာ	| Tagged Cabinet, Feedly, IFTTT, Laws, Luttaw, Recently Read	| Leaveacomment |
Posted on April 28, 2016 by freeburma
ပြီးခဲ့တဲ့ ရက်ပိုင်းတွေ အတွင်း မြန်မာနိုင်ငံ နေရာအတော်များများမှာ မိုးသက်လေပြင်း ကျရောက်ပြီး မိုးသီး ကြွေတာတွေကြောင့် ၁၆ ယောက် သေဆုံးပြီး အိုးအိမ်ထိခိုက် ပျက်စီးမှုတွေ ရှိခဲ့တယ်လို့ လူမှုဝန်ထမ်း ကယ်ဆယ်ရေးနဲ့ နေရာပြန်လည်ချထားရေး ဌာန ၀န်ကြီးက ပြောပါတယ်။ ပြည်တွင်း ပရဟိတ ကူညီပေးရေးအဖွဲ့တွေ နဲ့အတူ ၀န်ကြီးဌာန အနေနဲ့ ကူညီ ကယ်ဆယ်ရေးတွေ ဆောင်ရွက်ပေးနေတယ်လို့ ဝန်ကြီး ဒေါက်တာ ၀င်းမြတ်အေးက ပြောပါတယ်။ ကူညီကယ်ဆယ်ရေး လုပ်ငန်းတွေနဲ့ ပတ်သက်လို့ မခင်ဖြူထွေးက မေးမြန်းထားပါတယ်။
from Voice of America http://ift.tt/247xtMo
Posted in Disaster - ဘေးအန္တရယ်များ	| Tagged Disaster, Feedly, IFTTT, Recently Read	| Leaveacomment |
Posted in Cabinet - အစိုးရအဖွဲ့ပိုင်းဆိုင်ရာ	| Tagged Cabinet, Feedly, IFTTT, Laws, Luttaw, Recently Read	| Leaveacomment |
Posted in Luttaw - မြန်မာလွှတ်တော်ဆိုင်ရာ	| Tagged Cabinet, Feedly, IFTTT, Laws, Luttaw, Recently Read	| Leaveacomment |
Posted on April 27, 2016 by freeburma
ရပ်ကျေး အုပ်ချုပ်ရေးမှူးများ ပြန်ရွေးဖို့ သမ္မတရုံး ညွှန်ကြား
ရပ်ကွက်(သို့) ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး ရွေးချယ်ခန့်ထားမှုတွေကို နည်းဥပဒေတွေနဲ့အညီ ပြန်လည်ရွေးချယ်ခန့်အပ် တာဝန်ပေးဖို့ သမ္မတရုံး ကနေ ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာနကို စာပေးပို့ညွှန်ကြားခဲ့ပါတယ်။
via Voice of America http://ift.tt/24ku09X http://ift.tt/Tf1V41
MPC ကို အမျိုးသား ရင်ကြားစေ့ရေးနှင့် ငြိမ်းချမ်းရေးစင်တာ ဗဟို ဟု အမည် ပြောင်းလဲ ဖွဲ့စည်းမည်
မြန်မာနိုင်ငံ ငြိမ်းချမ်းရေး ပြန်လည် ထူထောင်ရေး လုပ်ငန်း ဗဟိုဌာန(Myanmar Peace Center-MPC) ကို အမျိုးသား ရင်ကြားစေ့ ရေးနှင့် ငြိမ်းချမ်းရေးစင်တာ ဗဟို ဟူ၍ အမည် ပြောင်းလဲ ဖွဲ့စည်းမည်ဟု နိုင်ငံတော် အတိုင်ပင်ခံ ပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် က ပြောဆိုကြောင်း သိရသည်
The post MPC ကို အမျိုးသား ရင်ကြားစေ့ရေးနှင့် ငြိမ်းချမ်းရေးစင်တာ ဗဟို ဟု အမည် ပြောင်းလဲ ဖွဲ့စည်းမည် appeared first on ဧရာဝတီ.
via ဧရာဝတီ http://ift.tt/1SKFLS0 http://ift.tt/1OYtTeJ
ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ ဦးဝင်းမြင့် မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များနှင့်တွေ့ဆုံ
via moi http://ift.tt/26udfLs http://ift.tt/1KnLGaX
နေပြည်တော် ၊ဧပြီ ၂၇ ။ ။ ငြိမ်းချမ်းရေးဖြစ်စဉ်များတွင် နိုင်ငံတော်၏ အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ကိုယ်တိုင်တာဝန်ယူဆောင်ရွက်မည့် ဖြစ်သဖြင့် လုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ရာတွင် ဆက်သွယ်ရေး ပုဂ္ဂိုလ်အဖြစ် ဒေါက်တာ တင်မျိုးဝင်းကို တာဝန်ပေးအပ်လိုက်သည်။
via မဇ္ဈိမ မာလ်တီမီဒီယာ http://ift.tt/26uaqKz http://ift.tt/1nfHMox
နေပြည်တော် ၊ဧပြီ ၂၇ ။ ။ ပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းများ အဓိကဆောင်ရွက်သည့် မြန်မာ့ငြိမ်းချမ်းရေးစင်တာ (MPC) ကို အမျိုးသားရင်ကြားစေ့ရေး ငြိမ်းချမ်းရေးအဖွဲ့ဟုအမည်ပြောင်းလဲကာ ဖွဲ့ စည်းသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ပြည်ထောင်စုအဆင့် ပစ်ခတ်တိုက်ခိုင်မှုရပ်စဲရေးဆိုင်ရာ ပူးတွဲစောင့်ကြည့်ရေးကော်မတီ(JMC-U) အတွင်းရေးမှူး ဗိုလ်မှူးကြီး ဝဏ္ဏအောင်ကပြောသည်။
နေပြည်တော်တွင် ဧပြီလ ၂၇ ရက်နေ့ နေ့ လည်ပိုင်းက နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် နှင့် JMC-U အဖွဲ့ ဝင်များတွေဆုံပွဲအပြီးတွင် ဗိုလ်မှူးကြီး ဝဏ္ဏအောင်က ယခုကဲ့သို့ ပြောကြားခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
“ အမျိုးသားရင်ကြားစေ့ ငြိမ်းချမ်းရေးအဖွဲ့ ဆိုပြီးတော့ ပြန်ပြီးတော့ဖွဲ့ စည်းမယ်လို့ လမ်းညွှန်မှုရှိပါတယ် ဖွဲ့ တဲ့အခါမှာလည်း လက်ရှိ JMC ကတော့ ဒီအဖွဲ့ အစည်းတွေနဲ့ ပဲ JMC အဖွဲ့ ဝင်တွေနဲ့ ပဲလုပ်ကိုင်သွားမှာဖြစ်ပြီးတော့ အသစ်ပြန်ဖွဲ့ မယ့်အဖွဲ့ မှာတော့ ကော်မတီတစ်ရပ် ဖွဲ့ စည်းပြီးမှ အဖွဲ့ ဝင်တွေကို ရွေးချယ်ဖွဲ့ စည်းသွားမှာဖြစ်ပါတယ် ” ဟု ဗိုလ်မှူးကြီး ဝဏ္ဏအောင်ကပြောသည်။
အသစ်ပြန်လည်ဖွဲ့ စည်းမည် အမျိုးသားရင်ကြားစေ့ရေးငြိမ်းချမ်းရေးစင်တာတွင်ပါဝင်မည့် ပုဂ္ဂိုလ်များကို ကော်မတီတစ်ရပ်ဖွဲ့ စည်းကာ ယင်းကော်မတီမှ ရွေးချယ်တာဝန်ပေးသွားမည်ဖြစ်သည်။
ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်များနှင့်ပက်သက်၍ မြန်မာ့ငြိမ်းချမ်းရေးစင်တာ ပြင်ဆင်ဖွဲ့ စည်းရေး နှင့် ငြိမ်းချမ်းရေးညီလာခံ ကျင်းပနိုင်ရေးကို အမြန်ဆုံးဆက်လက်ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း အဆိုပါအစည်းအဝေးသို့ တက်ရောက်ခဲ့သည့် ဦးကိုကိုကြီးကပြောသည်။
via မဇ္ဈိမ မာလ်တီမီဒီယာ http://ift.tt/24jVsF1 http://ift.tt/1nfHMox
တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင် မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ အမေရိကန်နိုင်ငံ သံအမတ်ကြီး မစ္စတာ စကော့ အလန်မာရှယ် အား လက်ခံတွေ့ဆုံ
via moi http://ift.tt/1VCdHE3 http://ift.tt/1KnLGaX
၂၁ ရာစုပင်လုံညီလာခံ အချိန်မဆွဲဘဲကျင်းပရန် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ပြောကြား (ရုပ်သံ)
The post ၂၁ ရာစုပင်လုံညီလာခံ အချိန်မဆွဲဘဲကျင်းပရန် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ပြောကြား (ရုပ်သံ) appeared first on DVB.
via DVB http://ift.tt/1Uh9rIP http://burmese.dvb.no